Ihe oyiyi meizu 16s Pro pụtara | Gam akporosis
A ọhụrụ elu-arụmọrụ ama na-abịa, onye ga-o doro anya na ka ojiji nke Qualcomm si ọhụrụ mobile n'elu ikpo okwu, nke bụ Snapdragon 855 Plus. Ngwaọrụ anyị na-ezo aka bụ Meizu 16s Pro, na, ekele otu onye ọnụ mmiri, anyị enweela ike ikpughe ihe ịchọ mma ya niile, iji tinye ya na data anyị na-anakọta na mmepe na-adịbeghị anya.
The Meizu 16s na oru na njedebe nke Eprel afọ a na Snapdragon 855 na njirimara ndị ọzọ na nkọwapụta teknụzụ nke usoro ọmụmụ. Ọnụ ọgụgụ a na-etu ọnụ maka ịrụ ọrụ nke ọma, yana obere ọnụ na ihu ihu ya, mana na-enweghị ọkwa na igwefoto na-agbapụta agbapụta. Onye nọchiri ya, nke bụ Pro dị iche iche nke anyị abanye n'ime n'okpuru, agaghị ewepụta ọdịiche dị mkpa dị ka ọdịdị dị, na ihe anyị na-ekwu na ị nwere ike ịhụ site na ile anya ihe edere ederede ewepụtara na nke anyị kwụpụrụ na ya ugbu a.
Nke a bụ ihe Meizu 16s Pro ga-adị
Rizered image nke Meizu 16s Pro
Ihe mbu anyi mere ka anyi mata mgbe anyi huru mmebe nke Meizu 16s Pro n’ile oyuyo bu ọ naghị eweta mgbanwe ọ bụla na ihu ihu ya, yana anyị na-elegharị anya, na azụ. Agbanyeghị, kama ịkwadebe igwefoto abụọ dị ka Meizu 16s, ọ nwere sel sensọ azụ atọ ugbu a, kwekọrịta n'otu ụzọ ahụ, nke kwụ ọtọ, ma dịkwa n'otu ọnọdụ.
A na-ekwu na ọ ga-abịa na a 586-megapixel Sony IMX48 lens mbụ na oghere telephoto 20-megapixel, Ọ bụ ezie na ekpughereghị ozi site na ihe mmetụta nke atọ ya, mana nke a nwere ike ịbụ 8 ma ọ bụ 5 MP ma lekwasị anya na ijide ozi maka ọnọdụ eserese. Igwe ọkụ LED dị ka mgbanaka dịkwa n'okpuru igwefoto igwefoto atọ.
Ọ na-atụ anya na-abịa na otu Nnukwu mkpebi Super AMOLED dị elu yana onye na-agụ mkpịsị aka na-etinye aka na nke a, yana ịkekọrịta ọtụtụ isi atụmatụ na nkọwapụta teknụzụ nke Meizu 16s. Na mgbakwunye na nke a, ọ ga-abịa nkwado maka ịkwanye ngwa ngwa nke 24 watts.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nke a bụ aesthetics nke Meizu 16s Pro, ọkọlọtọ na-esote ya na Snapdragon 855 Plus
Ọnọdụ Injinia na gam akporo: Ihe ọ bụ na otu esi enweta ya